मेरो उम्मेदवारी र समर्थन - Enepalese.com
इनेप्लिज २०७४ साउन १६ गते १७:५७ मा प्रकाशित
आदरणीय दाज्यु भाई तथा दिदि बहिनिज्यु हरु
हार्दिक नमस्कार !!!
अमेरिकाको दक्षिण–पूर्वी राज्यहरूमा बस्ने नेपालीहरूका प्रतिनिधिमूलक सशक्त संगठन नेप्लिज एशोसियसन इन साउथ इष्ट अमेरिका (नासा) को आगामी अधिवेसन नजिकिदै गइरहेको यहाँहरुमा सर्व बिदितै छ । आगामी सेप्टेम्बर ३ मा नयाँ कार्यसमितिका लागि निर्वाचन हुँदै छ । सोही निर्वाचनका लागि मैले आफ्नो इच्छा अध्यक्ष पदमा सार्वजनिक गरेको थिए त्यसै अनुसार मैले यहाँहरु माँझ आफ्नो कार्य योजना र सहयोगका लागि अनुरोध पनि गरेको थिए ।संस्थामा रहनु भएका मित्रहरुको आग्रह , सुझाव र मेरै इच्छाले संस्थाको नेत्रित्व लिन अग्रशर भएको थिए ! मैले नासामा महासचिवका हैसियतले जति गरे त्यो यहाँहरुसमक्ष जग जाहेरै छ र आगामी दिनमा पनि गरिहने छु । यतिखेर हामीले संस्थाको गरिमालाई उच्च पार्दै सामाजिक क्रियाकलापमा हातेमालो र सबैको भावनालाई कदर गरि सबैलाई समेट्दै लैजानु पर्ने आवस्यकता महशुस गरेको छु ! हरेक सस्थामा सबैपक्षको उत्तिकै भुमिका हुन्छ । अत , मलाई अध्यक्षपदमा प्रस्ताव गर्ने सबैलाई पुन एक पटक धन्यवाद दिदै यस पटक म आफु वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा रही मेरो समर्थन अध्यक्ष पदका अर्का प्रत्याशी मेरा प्रिय मित्र माधव ढकाल लाई रहने सबैलाई जानकारी गराउँदछु । साथीहरुले पनि यसै अनुरुप सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु । अन्त्यमा सम्पूर्ण मतदाताज्युहरुलाई आफ्नो अमुल्य मत प्रदान गरि विजय गराउनु हुन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछु !
कार्यकारी उपाध्यक्ष पदका( EVP) उम्मेदवा